Sukuchitha imali eninzi kuyilo lwakho lweWebhu | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 4, 2009 NgoLwesine, uJuni 29, 2017 Douglas Karr
Uninzi lwabahlobo bam bayili bewebhu- kwaye ndiyathemba ukuba abazukucaphuka kule posi. Okokuqala, mandiqale ngokuthi uyilo olukhulu lwewebhu lunokuba nefuthe elibonakalayo kuhlobo lwabathengi obatsalayo, amaqondo okuphendula amathemba okucofa, kunye nengeniso iyonke yenkampani yakho.
Ukuba ukholelwa kwimveliso enkulu okanye umxholo omkhulu onokohlula uyilo olubi, uyaphazama. Inkqubo ye- buyela kutyalo-mali kuyilo olukhulu ibonakalisiwe iphindaphindwe. Kufanelekile ixesha kunye nenkcitho.
Itshilo… uyilo olukhulu akufuneki lubize imali eninzi, nangona. Iinkqubo zangoku zokulawulwa komxholo wewebhu ezinje nge WordPress, Drupal, Django, Joomla, Magento (yorhwebo), Injini yokubonisa, njlnjl. Zonke zinee-injini ezinkulu. Zininzi iinkqubo zoyilo zewebhu, ezinje Iigridi zeYUI CSS, Kwiisayithi ezenziwe ekuqaleni.
Uncedo lokusebenzisa ezi nkqubo kukuba unako gcina kakhulu yewebhu yakho kunye nexesha loyilo lwegraphic. Uyilo lwewebhu lobuchwephesha lunokubiza i-2,500 yeedola ukuya kwi-10,000, XNUMX yeedola (okanye nangaphezulu ngokuxhomekeke kwipotifoliyo kunye nezalathiso zearhente). Ixesha elininzi elinokuchithwa ekuphuculeni ubeko lwephepha kunye neCSS.
Endaweni yokuhlawulela ubeko kunye ne-CSS, kutheni ungakhe ukhethe kumawaka eemixholo esele zakhiwe kwaye umsebenzi wakho wobugcisa bokuzoba ubhale uyilo lwegraphical? Ukophula uyilo olukhulu olwakhiwe kwi-Photoshop okanye kwi-Illustrator kunye nokuyisebenzisa kumxholo okhoyo kuthatha iqhezu lexesha kunokuba uyile konke kwasekuqaleni.
Uncedo olongezelelekileyo lokusebenzisa le ndlela kukuba ubeko lunokuchaphazela ukusebenza kweinjini yokukhangela kunye nokusebenziseka- into abaphuhlisi bemixholo abalumke ngayo ngaphambi kokuba bapapashe kwaye bathengise imixholo kwi-Intanethi. Kuba abafundi bam abaninzi bengabasebenzisi beWordPress, enye yeendawo endizithandayo yile WooThemes. KuJoomla, i IrocketThemes unokukhetha okumnandi.
Elinye icandelo elongezelelweyo lengcebiso, xa rhuma okanye uthenge le mixholo-qiniseka ukufumana ilayisensi yonjiniyela. Ilayisenisi yonjiniyela kwi-WooThemes imalunga neendleko eziphindwe kabini (isasebenza kuphela kwi- $ 150!). Oku kukubonelela ngeyona fayile ye-Photoshop yokubonelela ngegcisa lakho lokuyila kunye!
tags: DjangodrupalInjini yokubonisaJoomlaMagentoziingxangxaWordPressYahoo UIIgridi yui css
NgoJulayi 4, 2009 ngo-7:33 PM
Jul 7, 2009 ngo-1: 12 AM
Jul 8, 2009 ngo-12: 47 AM
Jul 10, 2009 ngo-4: 13 AM